Head Line News - कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक बुधबार बस्दै, जागरण अभियानको बिषयमा समिक्षा हुने
कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक बुधबार बस्दै, जागरण अभियानको बिषयमा समिक्षा हुने
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय जागरण अभियानको पहिलो चरणका विषयमा ७७ जिल्लाका केन्द्रीय प्रतिनिधिसँग छलफल गर्ने भएको छ। नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिमा बुधबार बिहान छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिने भएको हो। केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजना गरिने कार्यक्रममा जागरण अभियान, अबको रणनीति र वर्तमान राजनीतिक अवस्थाका विषयमा पनि छलफल हुने छ ।	थप पढ्नुहोस्
एसईई नतिजा प्रकाशनको तयारी अन्तिम चरणमा, भोली राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको बैठक बस्दै
काठमाडौं । यस बर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा प्रकाशनकालागि अन्तिम तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नतिजा प्रकाशनकालागि सम्पूर्ण तयारी सकिएको र पुनः परीक्षणको काम भइरहेको परीक्षा नियन्त्रक विष्णुप्रसाद अधिकारीले नेपाल बहस डटकमलाई जानकारी दिए । नतिजा प्रकाशन लगायतका बिषयमा छलफल गर्न कार्यालयले बुधबार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको बैठक बोलाएको छ । बोर्डले निर्णय गरेपछि परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक हुने परीक्षा नियन्त्रक अधिकारीले कुराकानीमा बताए । उनका अनुसार ढिलोमा विहीबारसम्ममा नतिजा प्रकाशन हुनेछ ।	थप पढ्नुहोस्
स्याङ्गजा । चापाकोट नगरपालिकाले आ.व .०७६/७७ को बजेट सहित नगरसभा सम्पन्न गरेको छ । आगामी आ.व.को लागि कुल ४४ करोड ५२ लाख ५७ हजार को बजेट प्रस्तुत गरेको छ । नगरसभामा आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को लागि बजेट प्रस्तुत गदै नगर प्रमुख शिव कुमार गिरीले जनताका आकांक्षा र आवश्यकता असिमित छन् तर श्रोत साधन सिमित छन् सर्वाेतोमुखी नगर विकासका लागि आ. व. ०७६/७७को बजेट ल्याएका छौँ भन्दै समृद्ध नगर निर्माणमा एकाकार हुन आग्रह गरे । नगरपालिकाले पुर्वाधार विकास,कृर्षि, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार र पर्यटनको क्षेत्रमा विषेश कार्यक्रम ल्याएको छ ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बल्खुस्थित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय (पनिका) ले सूचना प्रविधिमैत्री प्रणालीमार्फत सबै काम गर्न थालेको छ । पनिकाले यस वर्षदेखि परीक्षासम्बन्धी फाराम भर्ने, लब्धाङ्कपत्र नतिजा, सिम्बोल नम्बर र परीक्षा केन्द्रजस्ता सबै काम अनलाइनमार्फत गर्न थालेको पनिकाका सहनियन्त्रक पशुपति अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । पनिकाले www.tuexam.edu.np वेबसाइटमार्फत सबै काम गर्न थालेको छ । यस वर्षदेखि पनिकाको वेबसाइटबाट नै सिम्बोल नम्बर र परीक्षा केन्द्र हेर्न सकिनेछ ।	थप पढ्नुहोस्
राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता भो गुठी विधेयक
काठमाडौं । गुठीसम्बन्धी कानूनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ सरकारले आज राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता लिएको छ । गत वैशाख १७ गते संघीय संसदको राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको विधेयक मंगलबार फिर्ता लिइएको हो । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सरकारी मन्त्री पद्मा अर्यालले मंगलबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव राखेकी थिइन् । मन्त्री अर्यालले राखेको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएसँगै विधेयक फिर्ता भएको हो । राजधानी काठमाडौंसहित देशभर व्यापक विरोध भएपछि मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गुठी विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरिएको थियो ।	थप पढ्नुहोस्
कुनै व्यक्ति कुनै पार्टीका नेताको समर्थक हुन नपाइने यो कस्तो गणतन्त्र हो ?
काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका अन्तर्राष्ट्रिय विभागका सदस्य एवंम् अन्तर्राष्ट्रिय मोटिभेटर नरबहादुर कार्कीलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेपछि त्यसको विरोध सुरु भएको छ । नायिका रेखा थापाले कार्कीको गिरफ्तारीलाई लिएर राज्यको आतंकको वर्तमान रुप आफ्नै आँखाले देखेको टिप्पणी गरेकी छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उनले सामाजिक अभियान्ता समेत रहेका कार्कीलाई एक अपराधी जस्तो गरी प्रहरीले पक्राउ गरेको भन्दै आपत्ती जनाएकी हुन् ।	थप पढ्नुहोस्
संसदमा प्रधानमन्त्री ओलीकाे सट्टा अर्थमन्त्री खतिवडाले जवाफ दिएपछि !
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसदमा जवाफ दिन अनुपस्थित भएका छन् । मंगलबार मन्त्रालगत रुपमा विनियोजन गरिएको बजेटमाथि छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री आफै उपस्थित हुनुपर्ने भए पनि उनको सट्टा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले जवाफ दिएका छन् । खतिवडा मन्त्रिपरिषदका १६औँ बरियताका मन्त्री हुन् । संसदमा दुई उपप्रधानमन्त्रीसहित अरु वरिष्ठ मन्त्रीहरु उपस्थित भए पनि ओलीले खतिवडालाई नै जवाफ दिन निर्देशन दिएको स्रोतको भनाई छ ।	थप पढ्नुहोस्
संसदिय अभ्यासको वास्तविक नमुना कालिगण्डकी गाँउपालिकाको बजेट,उत्कृष्ट प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
स्याङ्गजा । असार दशलाई देशभरका अधिकांश स्थानिय तहहरुले पालिकासभा गर्ने दिन भनेर बुझिन्छ । स्थानिय तहहरुमध्ये कहिँ पालिका सभा गरेका छन् त कति स्थानिय तहहरुले विभिन्न विवादका कारण सुरुवात पनि गर्न सकेका छैनन तर स्याङ्गजाको कालिगण्डकी गाँउपालिकाले भने आफ्नो उत्कृष्टता आ.व. ०७६/७७ को बजेट मार्फत प्रस्तुत गरेको छ । गाँउपालिकाले असार नौ गते नै गाँउसभा सम्पन्न गरेको छ ।देशभरका अधिकांश स्थानिय तहहरुले निति नियम विपरित गरेको पाइएको छ ।	थप पढ्नुहोस्
इरानमा अमेरिकाको नयाँ प्रतिबन्ध, इरान भन्छ युद्धलाई निम्तो दिने अर्को एक कदम
काठमाडौं । अमेरिकाले इरानमा नयाँ प्रतिबन्ध लगाएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आफैंले प्रतिबन्ध लगाइएको घोषणा गरेका हुन् । प्रतिबन्धको निशानामा इरानका प्रमुख नेता आयातुल्लाह अलि खमेनीलाई पनि पारिएको बीबीसीले जनाएको छ । ट्रम्पले भनेका छन् नयाँ प्रतिबन्ध अमेरिकी ड्रोनमा आक्रमण गरेका लगायतका कारण लगाइएको हो । नयाँ प्रतिबन्धको आदेश जारी गरेपछि ट्रम्पले ह्वाइटहाउसमा भने, ‘इरानका सर्वोच्च नेता नै उनको सरकारबाट भएका सबै कामको जिम्मेवार छन् । उनलाई उनको देशमा धेरै सम्मान दिइन्छ ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सुनको भाउले फेरि कीर्तिमान बनाएको छ । मंगलबार आज सुनको भाउ बढेर तोलाको ६५ हजार ५ सय रुपैयाँ पुगेको भाउ निर्धारण समितिका संयोजक तेजरत्न शाक्यले जानकारी दिए। गएको शुक्रबारदेखि तोलाको ६५ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको भाउ मंगलबार तोलामा ५ सय रुपैयाँ बढेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको भाउ प्रति औँस ३० डलरले बढेको छ । सोमबार प्रति औँस १४ सय ४ डलरमा कारोबार भएको सुन मंगलबार १४ सय ३५ डलर पुगेको हो । डलर कमजोर हुँदा लगानीकर्ताको आकर्षण सुनमा परेकाले भाउ महंगो भएको शाक्यको भनाइ छ ।	थप पढ्नुहोस्